Akwụkwọ Elma Beganovich na Martech Zone
Edemede site na Ọnye na -bụ Elma Beganovich?
Ọnye na -bụ Elma Beganovich?
Nwada Beganovich na-eduga A&EMgbalị nke iwulite ndepụta nke ndị mmekọ na ndị ahịa ama ama n'ụwa. Mpaghara nka ya gunyere ichoputa oru nke A&E nwere ike igwu maka otutu udiri ahia di iche iche, tinyere imeputa usoro na nmekorita nke ndi ahu.
Tọzdee, Ọktoba 15, 2020 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Ọnye na -bụ Elma Beganovich?
COVID-19 agbanweela otú anyị si azụ ahịa. Site na oke ọrịa na-efe efe na mpụga, ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ ịnọ na ịzụta ihe n'ịntanetị kama. Ọ bụ ya mere ndị ahịa ji na-atụgharị uche na ndị na-eme ihe ike karịa maka vidio na ihe ọ bụla site n'ịgbalị na lipstick na igwu egwuregwu vidio kachasị amasị anyị. Maka ndị ọzọ na mmetụta nke ọrịa ahụ na-emetụta ahịa na ọnụahịa, lee ọmụmụ anyị na nso nso a. Ma olee otu ọrụ a maka ihe ndị ahụ ga-ahụ